कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दै विद्यालय - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७७, बिहिबार ६ : ५५
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणको ‘हटस्पट’ का रुपमा स्कुल कलेज देखिन थालेका छन् । पोखरा लामाचौरस्थित पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा हालै चार दिनमा ७० विद्यार्थीमा कोरोना देखिएको छ ।
इन्जिनियरिङको स्नातक तहको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षका परीक्षा स्थगन गरिएको छ । यस्तै, भक्तपुरस्थित वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालयका १० विद्यार्थीलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्भावित हटस्पटका रुपमा विद्यालय पनि परेको बताए । ‘भक्तपुरमा पनि एक्कासी धेरै विद्यार्थीमा संक्रमण भएको केसहरु देखिएका छन् । ८–१० जना विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ’, डा. पौडेलले भने ।
डा. पौडेलले कोरोना संक्रमणका लागि विद्यालय जोखिम क्षेत्र रहेको उल्लेख गरे । ‘विद्यालयको होस्टलबाट पनि धेरैमा संक्रमण हुने जोखिम छ’, उनले भने, ‘अभिभावकले संक्रमित भएको अवस्थामा बालबच्चालाई विद्यालय पठाइदिनु भएन ।’
काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा देखिएका संक्रमितमा शिक्षक एंव विद्यार्थीको संख्या उल्लेखनीय रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलका अनुसार शैक्षिक संस्था कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्न थालेको देखिएको छ ।
‘कोरोना संक्रमित भई अस्पताल भर्ना हुनेमा कलेज पढाउने शिक्षक, होटेलमा काम गर्ने कर्मचारी र तराईबाट पठाइएका बिरामी छन्’, प्रवक्ता डा. गौतमले भने, कोरोना संक्रमणको स्थिति पुनः उकालो लागेकोमा चिन्तित छौं ।